यी रोग भएकाहरुले भुलेर पनि नखानुहोस् ओखर Canada Nepal
यी रोग भएकाहरुले भुलेर पनि नखानुहोस् ओखर
भाद्र ९ २०७७
काठमाडौँ। स्वस्थ खानाको साथसाथै दैनिकरुपमा आफ्नो आहार वा खाजामा ड्राईफ्रुट्सलाई समावेश गर्नु निकै लाभदायिक हुने गर्दछ। बदाम, किसमिस, खजूर र ओखरसँगै, थुप्रै ड्राईफ्रुट्सहरुले स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ। ओखर पनि यस्तै ड्राईफ्रुट्सकै एक प्रकार हो।
ओखरको फलमा एउटामात्र बीउ हुन्छ, जसको आकार मानव मस्तिष्क जस्तो हुन्छ । हिजो आज यो मुख्य रूपमा केक, कुकीज र अन्य चकलेटका प्रकारहरुमा प्रयोग गरिन्छ। यसमा पाइने पोषण तत्वले धेरै प्रकारका शारीरिक अक्षमतालाई बढाउनुका साथै शरीरमा ऊर्जा थप्न मद्दत गर्दछ।
दैनिकरुपमा ओखरको उचित मात्राको प्रयोगले तौल घटाउन, मधुमेहको जोखिम कम गर्न, मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न, प्राणघातक रोग क्यान्सरको जोखिम कम गर्न, हाड तथा जोर्नी रोगका बिरामीहरुलाई, पाचन प्रणालीको सुधार गर्नदेखि दर्जनौँ अन्य रोगहरुबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। तर, हरेक कुराका दुई वटा पक्ष हुन्छन् एउटा हो फाइदा अर्को बेफाइदा।
कस्ता व्यक्तिले ओखरको सेवन गर्नु हुदैन
– एलर्जी भएका वा एलर्जी हुने व्यक्तिले कहिल्यै पनि ओखरको अत्याधिक सेवन गर्नु हुँदैन। यस्ता व्यक्तिले ओखर सेवन गर्दा चिकित्सकको परामर्श लिएर उचित मात्रामा सेवन गर्न सकिन्छ। एलर्जीको समस्या हुने व्यक्तिहरुले ओखरको सेवन गर्दा छातीमा समस्या आउनुका साथै सास फेर्न पनि कठिनाइ हुने गर्दछ।
– चिलाउने तथा छालामा बिमिरा आउने समस्या भएकाले पनि ओखरको सेवन गर्नु हँुदैन। यसका बोक्रामा यस्तो तत्वहरु हुन्छन्, जसले छालामा रातो दागहरू वा चिलाउनेपन निम्त्याउन सक्छ।
– ओखरको आत्यधिक वा उचित मात्रामा सेवन नगर्नाले छालाको क्यान्सर हुने जोखिम बढाउने गर्दछ। यस पाइने केहि त्यस्ता तत्वले छालामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै छालामा क्यान्सर हुने जोखिम बढाउँदछ।
भाद्र ९, २०७७ मंगलवार ०१:०१:५६ बजे : प्रकाशित
कोरोना कालमा ओखर खानु कति फाइदाजनक ?
काठमाडौँ। देशभरमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरु पीडित बनिरहेका छन् । मानिसहरुलाई पनि यतिबेला घरमा बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्न राज्यस्तरबाट अनुरोध गरिएको छ। यस भाइरसले अहिले दीर्घरोगीहरुलाई पनि आफ्नो शिकार बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा घरमा बसेर स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्ने र पोषणयुक्त खानेकुराहरु खानु आवश्यक हुन्छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलिरहेको बेला ओखर खानु कति फाइदाजनक हुन्छ त् ? यसैका सम्बन्धमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जानुहोस् ओखर खानुका फाइदा
प्रतिरक्षा सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने – ओखरमा प्रचुर मात्रमा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व पाइने भएकाले यसले प्रतिरोध क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। साथै दैनिक ओखरको सेवन गर्दा नयाँ रोग लाग्नबाट पनि बचाउँद छ। यसलाई सेवन गर्दा भिजाएर नियमितरुपमा सेवन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।
मुटु रोगीका लागि फाइदाजनक – ओखरमा हेल्दी फ्याट, भिटामिन, फाइबर, प्रोटिन, क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, कपर, सेलेनियम, र ओमेगा फ्याट्टी एसिड जस्ता धेरै फाइदाजन पोषक तत्वहरू हुन्छन्। त्यसैगरी, ओखर मुटुका बिरामीहरूका लागि राम्रो मानिन्छ। नियमित रूपमा ओखर सेवन गर्ने मानिसहरूमा सुन्निने समस्या पनि कम हुन्छ। यसकासाथै, यसले मुटु रोग लाग्ने सम्भावनालाई पनि कम गर्छ। कोरोनाबाट निको भएका धेरै व्यक्तिलाई हृदयघात भएको समस्या पनि देखापरेको छ। जसकारण, मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न ओखरको सेवन गर्नु फाइदाजनक मानिन्छ।
तनाव कम गरी राम्रो निद्रा लगाउने – यस कोरोनाको अवधिमा अधिकांश मानिसलाई केहि न केहि कारणले तनाव सृजना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, ओखरले तनावबाट मुक्त गराउन मद्दत गर्दछ, जसले राम्रो निद्रा लाग्छ। एकातिर ओखरमा रहेको ओमेगा ३ फ्याटी एसिडले रक्तचापलाई सन्तुलनमा राखी तनावलाई कम गर्दछ, अर्कोतर्फ ओखरमा रहेको मेलाटोनिनले राम्रो निद्रा प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउँछ।
अन्य फाइदा – ओखरको दैनिक सेवनले हड्डीहरूलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ। भिजाएर राखेको ओखर खानाले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्दै मधुमेहलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न ठुलो भूमिका खेल्छ। यस बाहेक, ओखरको सेवनले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको जोखिम पनि कम गर्छ।
जेठ ७, २०७८ शुक्रवार १५:०९:३३ बजे : प्रकाशित
यस्ता व्यक्तिहरूले भुलेर पनि नखानुहोस् काजुुु, नत्र हुनेछ क्षति
काठमाडौँ। काजुुु एक प्रकारको राम्रो ड्राई फ्रुट हो। जुन प्रायः सबै व्यक्तिहरुले खान मन पराउँछन्। यसलाई विभिन्न पकवान तथा मिठाइ बनाउन पनि मसलाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। यो स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै फाइदाजनक छ। यसमा पाइने भिटामिन, म्याग्नीशियम, पोटाशियम, कपर, जिंक, आइरन, म्याग्निज र सेलेनियमले काजुुुलाई खान योग्य र गुणकारी ड्राई फ्रुटको रुपमा चिनाउँछ।
मुटु रोगीका लागि फाइदाजनक – काजुुमा अन्य ड्राई फ्रुटस् भन्दा कम फ्याट हुन्छ । र यसमा फोलिक एसिडको अधिक मात्रा हुन्छ, त्यसैले यसको सेवनले मुटुको स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्नुको साथै यसमा पाइने एन्टिअक्सीडन्टहरूले मुटुरोग लाग्नबाट बचाउँदछ।
रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ – काजुुमा सोडियमको मात्रा कम हुने र यसमा पोटासियम र म्याग्नेसियम अधिक मात्रामा पाइन्छ, जसले रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्छ। सीमित र उचित मात्रामा यसको सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ।
हड्डीहरू बलियो बनाउने – काजुुमा म्याग्नेसियम साथै क्याल्सियम पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। जसले हड्डीको स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्द छ। यसमा रहेको म्याग्नेसियमले हड्डीहरूलाई भित्रै देखि बलियो बनाउँछ।
काजुुले कति बेला नोक्सान गर्छ ?
काजुु खानु एकदमै लाभदायक छ, तर यसको अधिक सेवनले यसले हानि पनि गर्न सक्छ। काजुुको अत्यधिक सेवनले उच्च रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ। यस बाहेक यसले तौल पनि बढाउन सक्छ। किनभने यसमा क्यालोरीहरू उच्च मात्रामा पाइन्छ। यसैगरी, काजुुुको अत्याधिक सेवनले पेट सम्बन्धी समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। यदि टाउको दुख्ने, माइग्रेन र मोटोपनाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, काजुुलाई मध्यम मात्रामा वा उचित मात्रामा मात्रै सेवन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिन्छन्।
जेठ ११, २०७८ मंगलवार १२:५२:२८ बजे : प्रकाशित
# ड्राई फ्रुट
उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर लगायतका रोगबाट बच्न खानुहोस् फर्सीका मुन्टा
काठमाडौँ - करेसावारी र बजारमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाइन्छ। सबै प्रजातीका सागहरु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक नै हुन्छन् । तर फर्सीको पातको सागबाट हामिले धेरै तत्वहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
फर्सीको मुन्टोमा भिटामिन ई, सी, ए, बी ६, पोटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस लगायतका खनिज पदार्थ पाइन्छ । युएसडीए नेशनल न्युट्रिएन्टको अध्ययन अनुसार फर्सीको पातमा यति धेरै गुणहरु हुन्छ र यसले विभिन्न खतरनाक रोग हुनबाट पनि बचाउँछ ।
तपाईले फर्सीको पातलाई नियमित भोजनमा समावेश गर्नु भएमा उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगबाट सुरक्षीत रहन सकिन्छ ।फर्सीको पातमा एन्टी–अक्सीडेन्ट पाइन्छ । फर्सीको पातमा भिटामिन ए प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ ।
जसले आँखालाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले शरीरमा भएको क्यान्सर कोषीकाहरुलाई रोक्न सहयोग पुर्याउँछ । यसको सेवनले प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
फर्सीको पातमा पाइने पोटासियमले तपाईको पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ । यस्तै उच्च रक्तचापलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा भिटामीन सी पाइने भएकाले छालाको सुन्दरता बढाउछ । मधुमेह रोगबाट राहत पाउनका लागि फर्सीको पातको साग खानु राम्रो हुन्छ ।
जेठ १६, २०७८ आइतवार २२:१२:०५ बजे : प्रकाशित
# फर्सीका मुन्टा
कोरोना कहरमा कसरी सुरक्षित रहने दीर्घरोगी र मुटुलाई स्वास्थ राख्ने ?
काठमाडौँ। कोरोनाभाइरसले दोस्रो लहर चलेपछि अहिले थुप्रै मानिसहरुको फोक्सोलाई क्षति पु¥याइरहेको छ। यो भाइरसले फोक्सोलाई मात्र नभई मुटुलाई पनि थुप्रै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा असर पु¥याइरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि हजारौँ संख्यामा मानिसहरु मुटुरोगबाट ग्रस्त छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरु संक्रमणको उच्च जोखिम रहने गर्दछन्। जसकारण, उनीहरुलाई संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहन विज्ञद्वारा रहन सल्लाह दिइन्छ।
कोरोनाको समय यस्ता धेरै बिरामीहरु थिए होला, जसको मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो । तर, तिनीहरूको कोरोनाका कारण उपचार हुन पाएन । अब, यस्तो समयमा आफ्नो मुटुको स्वास्थ्यलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ने बारेमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
अहिलेको अवस्थामा मुटुको शल्यक्रिया रोकिएको छ भने के गर्ने ?
चिकित्सकहरुका अनुसार अहिलेको अवस्थामा जसरी कोरोनाका बिरामीहरु बढिरहेका छन्। यस अवस्थामा अरु बिरामीहरु छायाँमा परेका छन्। तर, यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यमा केहि जटिलता आउन साथ चिकित्सकसँग उचित परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ। यसले मुटुको शल्यक्रिया वा ट्रान्सप्लान्ट नभएसम्म के गर्ने भन्ने जानकारी दिन्छ। अहिले यस्तो होइन कि मुटु रोगी तथा अन्य रोगीहरुको अस्पतालमा उपचार भएको छैन ।
यदि कसैलाई धेरै पीडा महसुस हुन्छ र आपतकालीन सहयोगको आवश्यक छ भने अस्पतालहरुमा कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीहरुका लागि पनि शय्या राखिएको छ। त्यसैले, स्वास्थ्यमा जटिलता आउँछ भने चिकित्सकको उचित परामर्श आवश्यक हुन्छ।
पल्स अक्सिमिटरमा मुटुको चाल १०० भन्दा बढी छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
चिकित्सकहरुका अनुसार सामान्यतय मानिसको मुटुको चाल ६० देखि ९० हुने गर्दछ। जब यो ६० भन्दा कम भएको छ भने यसले मुटुको गतिमा कमि आएको मानिन्छ भने जब यो ९० भन्दा माथि छ भने यसलाई हृदयगति छिटो भएको मानिन्छ। तर, यतिबेला मानिसलाई कोरोना संक्रमण भयो र उनीहरुलाई ज्वरो आयो भने उनीहरुको मुटुको चाल अधिक हुन्छ। यसैगरी, यदि अक्सिजन स्याचुरेसनमा पनि कमी छ भने यो कहिले काहिँ बढ्न सक्छ। यदि थोरै वृद्धि हुन्छ भने यसमा धेरै आत्तिनु आवश्यक छैन।
मुटुको दर के कारणले वृद्धि भएको त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किनभने, भेन्ट्रिकुलर ट्याकिआर्डिया भएका मानिसको पनि मुटुको चाल द्रुत गतिमा चल्ने गर्छ। जसमा मुटुको चाल १०० नभएर १७० देखि १८० सम्म पुग्छ। यस्तो अवस्थामा मुटुको ईसीजी गर्न निकै आवश्यक हुन्छ। जसकारण रोगको पत्ता लाग्छ।
कोरोना अवधिमा आफ्नो मुटुलाई स्वास्थ कसरी राख्ने ?
चिकित्सकहरुकाअनुसार यदि कसैलाई कोरोना हुनु अगावै मुटुरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पक्षघात वा कार्डियोभास्कुलर जस्तो अन्य समस्या छ भने उनीहरुको यस कोरोना कालमा मृत्युदर बढी रहेको छ। अमेरिकाको एक १४ हजार कार्डियोभास्कुलर बिरामीको अध्ययनमा अस्पतालमा भर्ना भएका करिब २६ देखि ३८ प्रतिशत मृत्युदर थियो।
यस्तो अवस्थामा यदि कसैलाई यस्तो किसिमको बिरामी वा रोग छ भने मृत्युदर निकै उच्च रहने सम्भावना हुन्छ। तर, यिनीहरुलाई कोरोना नै हुनु पर्छ भन्ने छैन। तसर्थ, यस्तो अवस्थामा आफ्नो औषधिलाई नियमित सेवन गर्नु, जीवनशैलीमा विशेष ध्यान राख्नु र खानपिनमा पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ।
जेठ १७, २०७८ सोमवार १६:२४:१३ बजे : प्रकाशित
# कोरोनाभाइरस संक्रमण
फलको राजा आँपका यस्ता छन् फाइदै फाइदा, यौन क्षमता बढाउनेदेखि क्यान्सरबाट छुटकारा
काठमाडौं - गर्मी मौसममा सजिलै पाइने फल हो हाँप । यसलाई स्वाद र स्वास्थ्यका दृष्टिले फलको राजा पनि भन्ने गरिन्छ । आँपमा प्रशस्त पानी पाइन्छ ।
एउटा आँपमा मात्र ८६ प्रतिशत पानी पाइन्छ । यस्तै यसमा भिटामिन ए, भिटामिन सी का साथै कपर, जिंक, मिनरल्स, फाइबर लगायतका धेरै तत्वहरु पनि पाइन्छ ।
पोको आँपमा सोडियम, पोटासियम, ताम्र, गन्धक, म्याग्नेसियम, क्लोरोन तथा नियासिन पनि पाइन्छ । हामिले आँपको नियमित सेवन गरेमा शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ । आँप एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त हुने भएकाले विभिन्न राृगबाट बच्न यसले सहयोग पुर्याउछ ।
आँप खानुका यस्ता छन् फाइदाहरु
एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त - आँपमा एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त हसन्छ । जसले कोषलाई पुनजीर्वन दिन सहयोग गर्छ।
कोलेस्ट्रेरोल नियन्त्रण - आँपमा फाइबर र भिटामिन सी पाइन्छ । जसले शरीरमा कोलेस्ट्रेरोलको लेवल कम गर्न सहयोग गर्छ ।
रोगप्रतिरोधी - आँपमा रोगप्रतिरोधी पनि हुन्छ । यसमा २५ प्रकारका क्यारोटेनोइड्स हुन्छन् र तिनीहरुमा उच्च मात्रामा भिटामिन सि हुन्५ ।
आँखा तेजिलो - आँपमा भिटामिन ए पाइने हुनाले आँखाको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसको सेवनले आँखा तेजिलो हुन्छ भने आँखाको समस्या पनि हुँदैन ।
यौन क्षमता बढाउने - आँपले यौन क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । यसमा भिटामिन ई पाइने हुनाले यसले मानिसमा यौनक्षमता बढाउन मद्दत गर्छ।
शरीरमा रगत बढाउन - आँपको सेवनले शरिरमा रगत पनि बढ्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइने हुनाले शरीरमा रगत बढाउनुका साथै एनिमियाको समस्याबाट टाढा राख्छ ।
क्यान्सरबाट बचाउछ - आँप एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त हुने हुनाले विभिन्न क्यान्सरबाट बचाउँछ । यसको सेवनले स्तन क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर कोलोन क्यान्सर तथा ल्युकेमियाबाट बचाउछ।
अन्य फाइदाहरु - आँपको सेवनले मधुमेह रोक्न मद्दत गर्छ। पेटमा हुने कब्जियत, एसिडिटी तथा ग्याँस्ट्राइटिसको समस्याबाट छुटकारा मिल्छ। मुटु सम्बन्धी समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
जेठ १८, २०७८ मंगलवार २२:१८:४१ बजे : प्रकाशित
पुरुषका लागि कपाल झर्नबाट बचाउने यी हुन् प्रभावकारी उपाय
काठमाडौँ। व्यस्त जीवन र आधुनिक जीवनशैलीका कारण मानिसमा थुप्रै किसिमका समस्याहरु आइरहेका छन्। अत्याधुनिक जीवनशैलीकै कारण महिला तथा पुरुषमा धेरै किसीमका स्वास्थ्य समस्या निम्तिएको छ। महिलाहरुमा सौन्दर्यताको ज्ञान भएका कारण पनि धेरैजसो महिलाहरु आफ्नो शरीरका हरेक अंगको विशेष ख्याल राख्ने गर्दछन्।
यद्यपि, केहि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनीहरुमा पनि थुप्रै नकारात्मक प्रभावहरु देखिन्छन्। तर, पुरुषहरुमा त्यस्तो ज्ञान र आलस्यपन नभएका कारण आफ्नो शरीरको ख्याल राख्न पूर्णरुपमा चुक्दछन्। धेरै समस्याहरुका बीच पुरुषहरुमा देखिने मूल समस्या भनेको कपाल झर्ने समस्या हो। जुन आधिकांश पुरुषहरुले शुरुवातमा ध्यान दिदैनन् र पछि आएर आफ्नो जवानीप्रति बिलौना गर्न थाल्छन्।
यसैगरी, धेरैजसो पुरुषहरूले आलस्यका कारण लामो समयसम्म एउटै किसिमको उत्पादनहरु प्रयोग गरिरहने र उक्त उत्पादनको अत्याधिक प्रयोगले कपालमा नयाँ किसिमका समस्याहरु देखिन थाल्छन्। जसका कारण, कपाल सुख्खा हुने, टुक्रिने र कपाल झर्न्ने समस्या उत्पन्न हुन थाल्छ।
यसरी कपाललाई ध्यान राख्नुहोस्
१. तोरीको र जैतुनको तेल मिलाइ कपालमा मसाज गर्ने – तोरीको र जैतुनको तेल मिलाइ कपालमा हल्का हातले मालिस गर्दा टाउकोलाई आराम हुनुका साथै कपाल झर्ने समस्या पनि बिस्तारै निदान हुन्छ। यसैगरी, हत्केलामा उक्त तेल लिएर तालुमा ठोक्नुहोस्, जसले गर्दा कपालमा चायाँ पर्ने समस्या पनि निर्मुल हुँदै जान्छ। कपालमा मज्जाले तेल लगाइसकेपछि तौलियालाई तातो पानीमा भिजाउने र त्यस तौलियाको बाफले टाउकोलाई सक्ने, यसो गर्दा टाउकोको सबै प्वालहरु खुल्छ र तेल कपालको जरासम्म पुग्दछ। जसले गर्दा कपाल मजबुद हुने गर्छ।
२. अण्डा लगाउनुहोस् – सर्वप्रथम एउटा अण्डा लिनुहोस् र त्यस अण्डाबाट पहेँलो भागलाई निकाल्नुहोस्, र त्यसलाई मजाले फिटेर कपालमा राम्रोसँग लगाउनुहोस्। आधा घण्टा पश्चात श्याम्पु लगाई राम्रोसँग धुनुहोस्। हप्तामा एक वा दुई पटक सम्म यस प्रक्रियालाई गर्नाले कपाल बलियो हुँदै जान्छ।
३. भिजेको कपालमा काइँयो नलगाउनुहोस् – भिजेको कपालमा कहिल्यै पनि काइँयो नलगाउनुहोस्। यदि भिजेको कपाल कोर्ने परे लामो दाँत भएको काइयो प्रयोग गर्नुहोस्। यद्यपि भिजेको कपालमा काइँयो प्रयोग नगरे पनि सुख्खा कपालमा २–४ पटकसम्म काइँयोले कपाल कोर्न सकिन्छ। यसो गर्दा, कपालमा जमेका फोहोर तथा चिल्लोपाना निस्किन्छ र नयाँ कपाल आउन मद्दत मिल्छ।
४. जेल र हेयर स्प्रे नलगाउनुहोस् – रसायानिक पदार्थयुक्त जेल र हेयरस्प्रे कपालमा लगाउँदा निकै नोक्सानी हुन्छ। रसयानिक पदार्थ कपालको भित्री जरामा छिरी कपाललाई जरैबाट मार्न सक्छ।
यसैगरी, टाउकोमा अधिकांश समय क्याप, टोपी वा ह्याट पनि लगाउनु हुँदैन। यसो गर्नाले पसिना, कीटाणु र फोहोर टाउकोमा जम्ने गर्छन् र कपाल जरैबाट मर्ने सम्भावना हुन्छ।
जेठ २०, २०७८ बिहिवार १४:२६:२१ बजे : प्रकाशित